Saturday March 18, 2017 - 12:33:01 in Somali News by Super Admin
Waagacusub.net - Dadkii Sucuudigu Marin biyoodka Baabal-mandabka Ku duqeeyey waxay u badnaayeen kuwo u dhashay Burco iyo laascanod ,Hargeysa dhawr qof ayaa kaga jira.
Magacyada dadka Sacuudiga Xasuuqay.
5:Aaamina Baaxeer oo kasoo jeeda Burco Dhimasho Balse si rasmi ah looma xaqiijin.
6:Hibaaq Axmed Tarabi oo kasoo jeeda Burco oo wali dhimashadeeda lagu muransan yahay.
9:Cabdiraxman hassan mohamoud oo dhaawac ah kana badbaaday duqayntaas kana soo jeeda laascaanood.
10:Maareeye Cabdiraxmaan oo dhaawac ah kana badbaaday duqayntaas kana soo jeeda laascaabood.
11:Cabdi Xasan oo dhaawac ah kana badbaaday duqantaas kana soo jeeda Laascaanood.
13:Cabdirisaaq Dayyaxo kana soo Jeeda Burco (Dhimasho)
15:Ibrahim Ahmed Sacadaale (Dhimasho).